Ọ bụrụ na ọ dịghị premiere na Netflix, ihe nkiri ọhụrụ nke Charlie Kaufman "Ana m eche echiche banyere njedebe ihe" ga-abụ otu ihe ahụ Christopher Nolan wepụtara n'oge na-adịbeghị anya "Tenet nwere mma abụọ. Nke a abụghị naanị n'ihi na ndị ọrịa na-akwa ụta maka akwụkwọ akụkọ Kaufman bụ "Antkind", onye na-akwado ihe nkiri a nwere obi ụtọ. Mgbaghara na ụbụrụ nke ihe nkiri Nolan na ọrụ nke Kaufman. Dị ka Tenet, ọrụ ọhụrụ nke Kaufman jupụtara na mgbanwe oge, isi ọwụwa nke mpako metaphysical na ịkọwa onwe onye nke ọma, na-eduzi anyị otu esi ele ya mgbe anyị na-ekiri. N'adịghị ka Tenet, ọ bụ onye enyemaka, aka-ala dị obere aka abụọ, na-achọ ịtụ anyị ụjọ na-enweghị inye nsogbu ntị anyị.
Ihe nkiri nkiri Jessie Buckley na Jesse Plemons abụghị ihe mberede. Ihe nkiri a gbasara otu di na nwunye ndị ọhụụ ọhụụ nwere ike ịda n'ihi na Barkley's Lucy gbara arụkwaghịm ma kwenye ịga leta nne na nna Plemons Jake. A gaghị akpọ Lucy-Lucy-onye nwere obi abụọ banyere mmekọrịta ahụ. Ọ bụ onye na-ese ihe-ikekwe physicist ma ọ bụ onye na-ede uri-na isi ya (nke anyị na-eleghara anya mgbe niile) okwu ndị na-enweghị isi na-ada ada ma nwee ike ikwughachi obi erughị ala obi ọjọọ nke Jack ma ọ bụ ihe nzuzu, ka ihu igwe na-akawanye njọ, ha na-abịaru nso. nso ụlọ nwata ya.
Ọ bụ ezie na ihe nkiri Kaufman na-enwekarị ntụpọ dị nro maka egwu na-emenye ụjọ nke dị, mgbe onye protagonist ahụ rutere n'ugbo nne na nna Jack, ana m eche maka "Ihe Na-agwụcha" nke na-emezi nke a site na otu ma ọ bụ karịa. Abụọ. Mama m na papa m dị obere (ndị Tony Colette na David Tris na-egwuri egwu, ha abụọ bụ ndị nzuzu), yana oge na-adịghị anya na nkwughachi okwu na-adọrọ adọrọ, ha gbanwere Lucy na Jack ịhụnanya ya n'oge na-adịghị anya mebiri ikike Lucy ịmata ọdịiche dị n’etiti ezi na ụgha.
Kedu ka nke a si aga? Na mbu ọ dị anyị ka anyị banyere “Twilight Zone” ma ọ bụ “The Shining”, mgbe ahụ ụdị China na Western nke Alain Resnais “Afọ Ikpeazụ nke Marienbad”, na Lucy - ma ọ bụ nwanyị Lucy anyị maara - chọtara na mberede ọ malitere mkparịta ụka na Jack nne na nna mere agadi na ndị isi ike. Ọrụ nke Buckley na Plemons agbanweela mgbanwe dị nro, nke na-eme ka anyị bụrụ ndị na-ezighi ezi, n'agbanyeghị na ihe nkiri a yiri ka ọ na-anwa iche echiche banyere itinye uche n'ihe mgbagwoju anya dị n'etiti di na nwunye, yana otu mmekọrịta mmadụ na ibe ya siri gbanwee nke anyị bụ (ma ọ bụ anyị chere na anyị bụ Onye ọ bụ?) Ọ na-etolite na ụzọ tọgbọrọ n'efu na nke gbara ọchịchịrị. Agbanyeghị na ọ dabere na akwụkwọ akụkọ onye edemede Canada bụ Iain Reid na 2016, ọ bụ naanị ọrụ Kaufman. Nzube, aghụghọ dabara na mwute na ara nke solipsism.
Mkpebi esemokwu nke Disney gafere nnukwu ụlọ ihe nkiri sịnịma nwere nsogbu na ịpịghachi ọrụ Mulan na Disney + (nke a na-akwụ ụgwọ n'elu ụgwọ ndebanye aha ọnwa maka ọrụ ntanetị), nyere nke a na-agwụ ike. Ofụri Esịt uru pụtara. Hapụ abụ na olu Eddie Murphy (Eddie Murphy), jiri ụdị mkpebi siri ike, ihe anyị na-enweta bụ ihe ọchị ọchị, nwanyị nwere ikikere nke ikikere nke na-agbaso atụmatụ izugbe na iti nke mbụ, mana ọ na-anwa ịgafe Ime Mulan ihe nkiri gbanwere n'onwe ya n'ime ike agha "Star Wars" dabere na ụdị ike. Liu Yifei rụrụ ọrụ dị mma na nwa agbọghọ nwere ọgụgụ isi. O mere ka nwa nwoke wee rụọ ọrụ nke nna nwere nkwarụ na ndị agha nke eze ukwu maka ya. Mana oke Gong Li lara onye amoosu n'iyi. O nwere olile anya ịmanye ya ịbanye n'alụmdi na nwunye ahụ ma kwatuo ya. Ndị nna ukwu gbochiri ikike nke ha abụọ. Stylistically, New Zealand director Niki Caro (whale rider) gbaziri kpamkpam na Wu Xia si fim, nke nkenke dọtara mba ndị a ma ama ama mgbe ihe ịga nke ọma nke "Crouching Tiger, Zoro Ezo Dragọn" (Dragọn Hucdenden) Anya ya (na-ahụ ma na-asọpụrụ "dike" , "Oflọ nke Flying Daggers") na "Nkọcha nke Ọlaedo Ọlaedo", mana omume ahụ abụghị nke izugbe dịka e chere n'echiche: ọtụtụ nleghara anya na igwefoto, mana anaghị m aghọta Otu esi eji ha iji bulie akụkọ.
Ka a ghara inwe mgbagwoju anya na mmegharị egwu nke ọnụ ụzọ nke Victor Hugo dere maka akwụkwọ akụkọ ahụ na 1862, ihe nkiri French a na-akpọ Les Misérables ka a na-akpọ Oscar na-anọchi anya akwụkwọ akụkọ Hugo nke mmụọ maara ka ọ katọọ ụzọ mmekọrịta Hugo si maa ha ikpe. E jidere ya ma wega ya na Montfermeil na mpụga Paris obere oge mgbe mmeri France World 2018 meriri. N'ime ime nke a, Ladj Ly, onye isi nhazi mbụ, jiri akụkọ ịkwa emo ndị a na-eme ihe ọchị wee mụọ banyere mkparị ndị uwe ojii ma mee ka ọnọdụ nke ndị na-eto eto si mba ọzọ kwabatara na usoro omempụ ka njọ. Ndị uwe ojii bụ ebe mbụ anyị na-abanye n'ime ụwa a, na fim a ga-efu na Ruiz (Damien Bonnard) n'ụdị ụbọchị ọzụzụ, nke bụ maka ngalaba mpụ mpụ n'okporo ámá Paris. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ewepụtara ihe nkiri ahụ dị ka usoro uwe ojii siri ike, Ly ga-amalite ịgbasawanye mbara igwe ya site na ikwe ka otu onye obodo nwere drone jide ọnọdụ na-arịwanye elu n'etiti ndị uwe ojii na otu ndị nọ n'afọ iri na ụma. N'ime ihe nkiri ahụ, a tọọrọ nwatakịrị ikpeazụ. Gbaa ya egbe na-anaghị egbu egbu Flash-Ball egbe. Mgbe esemokwu na ọgba aghara bilitere, enwere ihe ndị na-agba agba na ihe nkiri French dị ka Lahain na De Pan, kamakwa na "Lord of the Flies", "Lonely Home", "Teenage Boy" Ndị na-anụ ọkụ n'obi oge ochie "N'elu Edge" na “Ọbụna Eze ọdụm ahụ, dị ka mkpọsa ihe ike ụmụaka na-eji nlezianya eme atụmatụ, ekpughepụkwara usoro mbibi nke usoro ihe a. N'ime usoro ihe a, ndị okenye kwesịrị ichebe ha ugboro ugboro na-ere ọdịnihu nke onye. ■
"Ana m eche echiche banyere ịkwụsị" dị na Netflix, "Mulan" dị na Disney +, na Les Misérables na-egosi na ụfọdụ ụlọ ihe nkiri.
Daalụ maka ịgụ akụkọ a na weebụsaịtị anyị. Ka m na-adọrọ uche gị, etinyekwara m gị ihe ndị dị mkpa.
Isi ihe mere na 2020 enweela mmetụta dị ukwuu n’ọtụtụ ndị mgbasa ozi anyị, ya mere wetara anyị ego. Ugbu a, karịa oge ọ bụla, anyị na-adabere na ndenye aha gị dijitalụ iji kwado akụkọ anyị.
Denye aha na scotsman.com ma nwee ohere na-enweghị njedebe maka akụkọ Scottish na ozi n'ịntanetị yana na ngwa anyị, biko gaa na https://www.scotsman.com/subscriptions